Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay oo soo jeediyay in la joojiyo dagaalka Tukaraq - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaGolaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay oo soo jeediyay in la joojiyo dagaalka Tukaraq
June 8, 2018 Abdirahman Abdullahi Sheikh Somalia 0
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay oo soo jeediyay in la joojiyo dagaalka Tukaraq. [Sawirka]
New York-(Puntland Mirror) Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa walaac ka muujiyay dagaaladii dhawaan ka dhacay gobolka Sool oo u dhaxeeyay ciidamada Puntland iyo Somaliland, waxayna soo jeediyeen in la joojiyo.
“Golaha Ammaanka waxa uu ka walaacsanyahay dagaalkii dhawaan ka dhacay gobolka Sool ee waqooyiga Soomaaliya. Golaha Ammaanka waxa uu u soo jeedinayaa dhinacyada dagaalamaya in ay si dhaqso ah colaada u joojiyaan oo ay kala qaadaan ciidamadooda ayna wadahadal yeeshaan.” Ayaa lagu yiri bayaan kasoo baxay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay.
Ciidamada labada dhinac ayaa isku horfadhiyay deegaanka Tukaraq tan iyo markii ciidamo hubeysan oo ka socda Somaliland ay bishii Janaayo ee sanadkan la wareegeen Tukaraq, oo 80 km dhanka waqooyiga ka jirta Garoowe.
April 9, 2018 Jawaari oo iska iscasilay afhayeenka baarlamaanka
June 16, 2018 Raysulwasaaraha Itoobiya oo Muqdisho ku tagay safarkiisii ugu horeeyay
Ciidamada dowladda Soomaaliya oo sargaal sare oo Al-Shabaab katirsanaa ku dilay gudaha gobolka Gedo
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamada dowladda Soomaaliya ee jooga gobolka Gedo ayaa dilay sargaal sare oo Al-Shabaab katirsan, sida ay sheegeen ilo-wareedyadu. Waxaa la dhihi jirey sargaalka la dilay Cabdullaahi Khannaas kaasoo ahaa hoggaamiyihii Al-Shabaab ee gobolka [...]